The Ab Presents Nepal » घरको सिसा फुट्दा मेयरलाई ३० लाख, गोलीले पेट फुटेका घाइतेले सुको पाएनन्!
घरको सिसा फुट्दा मेयरलाई ३० लाख, गोलीले पेट फुटेका घाइतेले सुको पाएनन्!
बिर्तामोड -: ०७४ कात्तिक १० मा अर्जुनधारा ११ का बालक लक्ष्मण सिवाकोटीको मृत्यु प्रकरणले बिर्तामोड तनावग्रस्त थियो । बिहानैदेखि स्थानीय आन्दोलित थिए । त्यही क्रममा आक्रोशित समूहले बिर्तामोडका नगर प्रमुख ध्रुव सिवाकोटीको घर र गाडी तोडफोड गरेको थियो ।
भोक लाग्छ मज्जाले खान खोज्छु पेटले थेग्दैन नेपालीले भने खाएपछि पचाउन झन् समस्या छ ।उनको हातको समस्या झन् जटिल छ । रड हालेको छ । हातबाट निरन्तर पिप बगिरहन्छ । घाउ पाकेको छ । ड्रेसिङ गर्न पनि सक्ने अवस्था छैन ।